उही ईमेल मार्केटिंग पेन ... १० बर्ष पछि। | Martech Zone
मङ्गलबार, अक्टोबर 18, 2011 बिहीबार, सेप्टेम्बर 19, 2013
म गएको हप्ता सडकमा हिट आएको भेट्न डिलिभ्रा ग्राहक र मा बोल्नुहोस् ईमार्केटिंग संघ प्रोविडेन्स, RI मा घटना। मैले सिकेको यो के हो… ईमेल मार्केटर्सको समस्याहरू त्यस्तै समस्याहरू हुन् जुन मैले १० बर्ष पहिले गरेको थिए जब मैले यो व्यवसाय सुरु गरें। टेक्नोलोजी र अपननको प्रगतिको बावजुद, वास्तविक जीवन विपणकहरू दैनिक निर्माण स strate्घर्ष रणनीति, स ,्लग्नता, मापन, छुट दिने क्षमता, खुला दरहरू र ईमेलको अन्य मौलिक रणनीतिहरूको साथ संघर्ष गर्दछन्। म आधारभूत सूची निर्माण रणनीतिहरूको बारेमा प्यानलमा थिए र कोठा भरियो ... केवल कोठामा मात्र!
ठूलो समाचार, जहाँ हामी १० बर्ष पहिले भएको तुलनामा यो केहि ज्ञान, तथ्या .्क र विशेषज्ञता को एक विशाल धन छ यी समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्न। प्राय: जसो भन्दा पनि होईन, मैले के फेला पारे कि ईमेल मार्केटरहरू स्मार्ट, वास्तवमै स्मार्ट छन्। तिनीहरूसँग ज्ञान र रणनीति छ उत्कृष्ट ईमेल अभियानहरू सिर्जना गर्न; तिनीहरूलाई अझै राम्रो संसाधनहरू चाहिन्छ कि त्यो पैसा, कर्मचारी वा समय नै हो।
यस समूहबाट पत्ता लगाउन म उत्सुक छु ... मुख्य समस्याहरू के हुन् जुन तपाईंले आफ्नै ईमेल प्रोग्रामहरूको साथ सामना गरिरहनु भएको छ? हो र:
एक मोबाइल मैत्री ईमेल डिजाइन गर्नुहोस्